श्रीमती गुमाउँदा पीडामा रुँदारुँदै वाक्य बसेको छ, आँसु सकिएको छ ! – Khabarhouse
श्रीमती गुमाउँदा पीडामा रुँदारुँदै वाक्य बसेको छ, आँसु सकिएको छ !
Khabar house | २८ माघ २०७६, मंगलवार ०२:२१ | Comments
काठमान्डौ : ‘ओ गड, मैले दुई घण्टा लगाएर गरेको प्रार्थनाको के सजाय दियौ?’सोमबार बिहान मर्निङवाक र पूजापाठ सकेर घर आइपुग्दा श्रीमतीलाई मृत फेला पारे पछि भाववि’ह्वल भएका पूर्वसचिव अर्जुन कार्की पशुपतिनाथसँग गुनासो गरिरहेका थिए। सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि कार्की सधैँजसो बिहान गल्फ खेल्न सिनामंगल जाने गर्थे। सोमबार पनि गए तर, उनले गल्फ खेलेनन्।
पशुपतिनाथको मन्दिर गएर दुई घण्टा लगाएर पूजापाठ गरे।११ बजेतिर घर फर्केर हर्न बजाए तर ढोका खुलेन। आफैँले खोलेर गाडी पार्क गरे र घरभित्र पसे। घरभित्र पस्नेबित्तिकै कामदार विजय चौधरी झु’ण्डिएको अवस्थामा देखे। उनको सातो उड्यो। हतार हतार दौडिएर पहिलो तल्लामा रहेको भान्सामा पुग्दा उनले जस्तो दृश्य देखे, तत्काल उनलाई सारा जीवन अन्धकार लाग्न थाल्यो।
उनकी ४९ वर्षीया श्रीमती मुना कार्की र’गतको आ’हालमा डु’बेकी थिइन्। उनले केही सोच्नै सकेनन् । उनी त्यहीँ मु’र्छा परेर ढले। १० मिनेट पछि उठेर उनले चि’च्याए, ‘मेरो श्रीमती मा’र्‍यो…!’कार्की चिच्याएको सुने नजिकै घर भएका यामिन्द्र ओलीले। उनको मनमा चिसो पस्यो। ओलीले तत्काल सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र सानेपाका अध्यक्ष दाना थापा मगरलाई फोन गरे र पूर्वसचिवको घरभित्रबाट चि’च्याएको आवाज आएको विवरण सुनाए।
थापामगरले ह’त्तपत्त महानगरीय प्रहरी प्रभाग सानेपाका इन्सपेक्टर कोसिस बाबु जोशीलाई फोन गरेर यसबारे जानकारी दिए । ‘मलाई ११ बजेर ३८ मिनेटमा मान्छे मा’रेको भनेर कल आयो। मैले तत्काल इन्सपेक्टरलाई खबर गरेँ, प्रहरी पुग्दा ११ बजेर ४७ मिनेट गएको थियो होला,’ थापामगरले भने। त्यसपछि इन्सपेक्टर जोशीले ह’त्तपत्त एम्बुलेन्स बोलाए र मा’ताहतका सबै निकायमा ‘म’र्डर’को घ’टना घ’टेको सूचना दिए।
त्यतिबेलासम्म वरिपरिका छिमेकी कार्कीको घरमा जम्मा भइसकेका थिए। सेतो रंगको कुर्सीमा बसेर कार्की रो’इरहेका थिए। उनका ओठ क’लेटी परेका थिए। भगवानमाथिको भ’रोसा टु’टेको भन्दै उनी वि’लाप गरिरहेका थिए। श्रीमती गु’माउँदाको घो’र पी’डामा उनी छन्। रुँदारुँदै उनको वाक्य बसेको छ, आँसु सकिएको छ।